Kor u qaadista Codadka
ee Hal -abuurayaasha Mustaqbalkeena
Baaq Dadka Ka Yimid
UnCommission-ku waa fursad ballaaran, kala duwan, iyo fursad ka qaybqaadasho taaso 600 oo qof oo dhallinyaro ah ay ku wadaageen waayo-aragnimadooda si loo aqoonsado tixgalinta diyaargarowga waxqabad ee mustaqbalka waxbarashada STEM iyo fursada.
Sheekooyinkaas, saddex aragtiyood ayaa ka soo baxay kuwaas oo tilmaamaya waddada loo maro sidii loo heli lahaa waxbarasho siman oo STEM ah dhammaan carruurta waddankeenna, gaar ahaan Black, Latinx, iyo bulshooyinka Ameerikaanka ah.
Dhalinyaradu ma quusan; waa la eryay oo waxay rabaan inay isbeddel ku sameeyaan STEM.
Aad bay muhiim ugu tahay dhallinyaradu inay dareemaan ka mid ahaanshahooda STEM.
Macallimiintu waa xoogga ugu awoodda badan ee kobcinta lahaanshaha STEM.
U QODO GARABKA
Sannado jira (da'da dhexe)
Dadka midabka leh
dheddig ama aan binary ahayn
Sheekooyinka laga maqlay a
qof weyn oo taageeraya sheekadooda
Gobolada, oo ay ku jirto Washington, DC
JIDKA HOR U SOCDA
Fikradaha laga helay sheeko-yaqaanadeena UnCommission ayaa hagaya 100Kin10's marxaladda tobanka sano ee soo socota ee shaqada si loo sii daayo jiilka soo socda ee hal-abuurayaasha iyo xalinta dhibaatada. 100Kin10, oo bilaabmay 2011 iyada oo laga jawaabayo Baaqa Madaxweyne Obama ee ah 100,000 oo macallimiin STEM ah oo aad u fiican toban sano gudahood oo dhaafiyay yoolkan 2021, waxa ay rajaynaysaa in waxa ka soo baxaya Guddi la'aantu ay noqoto hadafkeena xiga ee la wadaago. Hadafka cusub ee 100Kin10 iyo shabakadu waxay bilaabmi doontaa dayrta 2022.